Iingcebiso ze-NTT-Toner zokuphucula imisebenzi yakho yoyilo eprintiweyo kunye noMzalwana oomatshini | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcebiso ze-NTT-Toner zokuphucula imisebenzi yakho yoyilo eprintwe ngoomatshini bakaMzalwana
UMelisa Perrotta | | ngokubanzi, Amaqhinga, Ezahlukeneyo
Xa usebenza ngeefayile zedijithali, iingxaki zehardware aziyiyo eyona nto siyithandayo. Iingxaki zihlala ziqala xa sizama ukwenza loo msebenzi mhle usithathe ixesha elininzi kunye nomzamo. Nantsi indlela Izinto zokuqala ezonakalisiweyo okanye ezingaphenduliyo ngabashicileli.
Iimpawu azihlali zisithanda ukusebenzisa ii-inki ezihambelanayo, iiprinta zinamaxabiso afikelelekayo kwaye ziza zilayishwe ngaphambili kunye neekhatriji zomthwalo wesiqingatha esivumela ukuba senze iiprinta ezimbalwa. Emva kwexesha, ishishini lokwenyani likwiinki, ngamaxabiso ahlala exhaphaza kwaye yiyo loo nto ii-inki ezifanelekileyo zinomdla kakhulu. Iikhatriji ze-inki ezihambelanayo zihlala zikhetha ukuba ziqwalaselwe.
Ngamanye amaxesha iingxaki zokuhambelana ziyavela neekhatriji ezifanelekileyo. Amaxesha amaninzi ziingxaki eziphindaphindayo, kwaye xa sele usazi, kulula kakhulu ukusombulula.
Kwimeko, umzekelo, abashicileli bakaMzalwana esithetha ngabo, kukho iingxaki ezithile eziqhelekileyo ezinokwenza umshicileli wethu angabinamsebenzi kodwa ezinokusonjululwa ngokulula. Ngokuqinisekileyo eyona ngxaki iphambili, leyo isenza ukuba sizame ukuhambelana kwaye singabuyeli kuyo sisaziso sokuba ayiyamkeli iCartridge yethu. Ngale ndlela sicinga ukuba ayihambelani kwaye sibuyela kwii-inki zokuqala.
Kodwa oku kunesisombululo. Yenzelwe yona I-NTT-Toner Isicebisa kwaye icacisa ngokweenkcukacha indlela esinokusombulula ngayo iingxaki ezivela ngexesha lokuprinta. Kule nqaku, uJordi R, uyacacisa indlela yokwenza ukuba abashicileli bakaMzalwana baqonde iikhatriji ezifanelekileyo. Ngale ndlela ungasebenzisa iintlobo ezahlukeneyo ze Iikhatriji kunye nee-inki zoMzalwana
1 Ngaba umshicileli wakho uMzalwana akaziboni iikhatriji ezifanelekileyo?
1.1 Isinyathelo sokuqala kukujonga i-chip yeCartridge chip
1.2 Sichaza ukuba ungayitshintsha njani i-chip
1.3 Ukuba i-chip ingcolile
1.4 Hlela kwakhona ikhawuntari esemgangathweni ophantsi okanye ichip
1.5 Jonga iikhatriji ezifanelekileyo
1.6 Jonga umshicileli
Ngaba umshicileli wakho uMzalwana akaziboni iikhatriji ezifanelekileyo?
Ukuba unayo Mzalwana umshicileli kwaye ngequbuliso ayiziboni iikhatriji ezifanelekileyo, sichaza indlela yokuthintela umshicileli wakho kaMzalwana ekuboniseni umyalezo we "ICartridge ayamkelwa" Inyathelo nenyathelo.
Isinyathelo sokuqala kukujonga i-chip yeCartridge chip
Kwi-chip lonke ulwazi lwekhadiji ligcinwa, ukuba libonisa iimpazamo okanye lisebenza kakuhle, inqanaba le-inki, ushicilelo olwenziwe phakathi kwezinye izinto kwaye kuhlala kungunobangela wokuba umshicileli wethu ayeke ukwamkela iikhatriji ezifanelekileyo.
Kubalulekile ukuba i-chip ikwimeko elungileyo ukuze iCartridge isebenze ngokugqibeleleyo, oko kuthetha ukuba ukuphatha kakubi kunokubangela umonakalo ongenakulungiswa ngokuba buthathaka.
Sichaza ukuba ungayitshintsha njani i-chip
Kwelinye icala, kuya kufuneka ujonge ukuba impazamo ayisiyiyo leyo chip sele icimile. Kule meko kuya kufuneka wenze njalo lungisa kwakhona yiyo loo nto
Kwelinye icala sinako buyisela iCartridge Kodwa ukuba asifuni okanye asinalo ixesha okanye imali yokuthenga enye kwaye sinamakhono, singazitshintsha thina ngokwethu.
Uncedo lokusebenzisa Iikhatriji ezihambelanayo kukuba kwezi chips zithengiswa zodwa, ngokungafaniyo nemvelaphi apho yonke iCartridge kufuneka itshintshwe.
Kwelinye icala kufuneka uyilahle chip ikwimeko embi ukuze ukwazi ukubeka entsha. Sebenzisa imela ejikeleze incam ngononophelo. Qaphela ukuba ezinye iichips zikhuselekile kunye nomphathi weplastiki. Ukuba eyakho ayinayo, kuya kufuneka usebenzise iglu eyomisa ngokukhawuleza omele ukuyibeka emaphethelweni e-chip ngononophelo olukhulu ukuze ukwazi ukuyibamba.
Ukuba i-chip ingcolile
Ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukuba i-chip ichaphazelwe nje ngeentsalela ze-inki kwizishicilelo, oko kuthetha ukuba Kuya kufuneka uyicoce ngokusebenzisa iqhekeza ledyasi. Nciphisa i-gauze ngokuhlikihla utywala okanye amanzi ukucoceka, uze usebenzise enye ingcezu ye-gauze engaxutywanga ukuyomisa. Ukuba kuphela ukuba iCartridge kufuneka isebenze ngokugqibeleleyo, ukuba ayisebenzi kuya kufuneka ujonge ukuba abafowunelwa bomshicileli abakhange banabalaKule meko, kuya kufuneka uqhubeke nokuzicoca.
Hlela kwakhona ikhawuntari esemgangathweni ophantsi okanye ichip
Ezinye iingxaki apho umshicileli wakho angaziboni iikhatriji ezifanelekileyo ozisebenzisayo kusenokwenzeka ukuba i-chip ikumgangatho ombi, Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ucinge ngokutshintsha iikhatriji ezifanelekileyo kwaye ujonge ezifanelekileyo ukuze ukwazi ukuprinta ngaphandle kwengxaki.
Kwelinye icala, inokuba kufuneka usete kwakhona ikhawuntara yomshicileli ethi ngamanye amaxesha iyeke ukusebenza kakuhle kwaye isibonise impazamo nangona iCartridge igcwele ngokupheleleyo kwaye sine-inki yokugcina.
Kwiprinta kukho icandelo lokusetha kwakhona ngaphandle kweengxaki.
Jonga iikhatriji ezifanelekileyo
Ukuba i-chip ayisiyongxaki inokuba ikwi-cartridge efanayo.
Ukwenza oku, jonga ukuba iCartridge ifakwe ngokufanelekileyo kwiprinta. Ukuba akunjalo, ibekwe kakuhle ngokuyityhala ngocoselelo ngaphakathi ukuze ibambelele, oko kuya kwenzeka xa usiva unqakrazo.
Kule meko umshicileli uya kuyifumana kwakhona kwaye kufuneka isebenze ngokuchanekileyo.
Kwelinye icala Kungenzeka ukuba iCartridge ayikho kwimeko kwaye inesiphene, Oko kuthetha ukuba kufuneka siyalile kwaye sithenge enye iCartridge njengoko ingenakulungiswa.
Kwinxalenye yokugqibela kufuneka jonga umshicileli kuba inokuba sesona sizathu sokuba ungazi neekhatriji. Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba xa uhlaziya iFirmware, ayisababoni ngenxa yohlaziyo. Ngamanye amaxesha iinkampani zenza uhlaziyo kuthi ukuba zithenge iikhatriji zentsusa kwaye kule meko kunzima ukubuyela kuhlobo lwangaphambili kodwa akunakwenzeka nokuba. Unokufumana ulwazi malunga nokubuyela kuhlobo lwangaphambili kwaye baya kukucacisela inyathelo ngenyathelo ukuze uqhubeke nokusebenzisa umshicileli wakho ngeekhatriji ezifanelekileyo kwaye ungachithi imali eninzi.
Ukuba awuhlaziyanga, musa. Umshicileli uya kuqhubeka nokusebenza ngokuchanekileyo ngaphandle kohlaziyo kwaye awusoze ube nangxaki ngezi ntlobo zeekhatriji.
Ngoku ukuba uyazi ukusombulula ingxaki, ungazisa iprojekthi yakho ebomini. Kwaye usebenzise neekhatriji ehambelanayo ngaphandle iingxaki.
Ngezi ngcebiso zilula sisombulula into enokuba yingxaki enkulu kwaye siyafumana kwakhona iikhatriji zethu ezifanelekileyo zomshicileli wethu kaMzalwana. Ngaba uyazi naziphi na iingxaki eziqhelekileyo ezinxulunyaniswa nokusebenzisa ii-inki zeekhatriji ezihambelanayo? Mhlawumbi nathi sinokuyilungisa.
Ukukwazi ukukhetha ukusebenzisa into esiyithengileyo lilungelo ekufuneka silibanga. Ukhetho loluphi uhlobo lwe-inki oyisebenzisayo kufuneka lube lolwakho hayi umlinganiso omiselweyo. Yonwabele iCartridge yakho ehambelanayo okanye eyokuqala, nokuba ukhetha yiphi ;-)
Usebenzisa ntoni? Ngaba uhlala udla ii-inki ezihambelanayo okanye uhlala usiya kwezokuqala? Ngaba ucinga ukuba ezihambelanayo zinomgangatho ofanayo ne-inki yentsusa? Sinomdla kakhulu ekwazini uluvo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Iingcebiso ze-NTT-Toner zokuphucula imisebenzi yakho yoyilo eprintwe ngoomatshini bakaMzalwana
UFacebook uxolisa kwiphulo lokwazisa
Ukuphumelela kwee-studio ezizimeleyo eziyi-6